मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा यसरी पठाउन सकिन्छ गोप्य मेसेज (भिडिओ) :: Setopati
मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा यसरी पठाउन सकिन्छ गोप्य मेसेज (भिडिओ)
तपाईंहरूलाई थाहा छ? फेसबुक मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा हामीले 'सिक्रेट मेसेज' पठाउन वा गोप्य रूपमा च्याट गर्न सक्छौं। र यसका लागि अर्को कुनै नयाँ एपको आवश्यकता पनि पर्दैन।
यो सुविधा मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममै सिक्रेट मेसेज भनेर उपलब्ध हुन्छ।
यसबाट तपाईंले आफ्ना साथीहरूलाई गोप्य रूपमा सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो मेसेज मेसेज बक्समा सधैं रही पनि रहँदैन। तर यसका लागि तपाईंले केही प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
मेसेन्जरमा यसरी पठाउन सकिन्छ गोप्य मेसेजः
मेसेन्जर लग इन गर्ने। मेसेन्जर लग इन हुने बित्तिकै त्यहाँ हामी आफ्नो च्याट सूची देख्न सक्छौं। अब तपाईं जोसँग च्याट गर्न चाहनुहुन्छ ती व्यक्ति छान्नुपर्ने हुन्छ। र ती व्यक्तिसँगको च्याट बक्समा जानुपर्छ।
त्यसपछि स्क्रिनको दायाँपट्टी माथिल्लो भागमा फोन कल, भिडिओ कललगायत अप्सनहरू देखिन्छ। सबैभन्दा कुनामा रहेको 'आई' जस्तो आइकन थिच्नुपर्छ। यहाँ 'गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन' भन्ने अप्सन देखिन्छ। त्यो अप्सन थिचेपछि अब सिक्रेट च्याट गर्न सकिन्छ।
सन्देश गोप्य राख्न पठाएको केही बेरमा आफैं हट्ने सुविधा छ। यसका लागि कति समयमा हराउने भनेर टाइमर सेट गर्नुपर्छ । यो समय ५ सेकेन्डदेखि २४ घण्टासम्म राख्न सकिन्छ। यसरी समय राखेपछि, मेसेज सिन भएपछि त्यो समयभित्र मेसेज आफैं हट्छ। यसका लागि मेसेज पठाउने र पाउने दुवैले टाइमर सेट गर्नुपर्छ।
टाइमर सेट गर्न बिर्सनुभयो भने पनि केही छैन। त्यो सिक्रेट च्याट लिस्टमा बसिरहन्छ। पछि डिलिट च्याट गर्न सकिन्छ।
यसको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यदि हामी मोबाइलबाट सिक्रेट च्याट गर्दैछौं भने त्यो ल्यापटपको मेसेज बक्समा देखिन्न। ग्रुपमा भने सिक्रेट च्याट गर्न मिल्दैन।
मेसेन्जरको सिक्रेट च्याटको स्क्रिनसट लिएर राख्न भने सकिन्छ। र स्क्रिनसट लिएको कुरा अर्को मान्छेले थाहा पाउँदैन।
इन्स्टाग्राममा यसरी गर्न सकिन्छ गोप्य च्याटः
इन्स्टाग्राममा प्रयोगकर्ताले भ्यानिस मोडमा बसेर गोप्य कुरा गर्न सक्छन्। त्यसका लागि सुरूमा च्याट गर्न चाहेको व्यक्तिको च्याट-बक्समा जाने। मेसेज टाइप गर्ने स्पेसभन्दा माथि स्वाइप-अप गर्ने। यसरी प्रयोगकर्ता भ्यानिस मोडमा पुग्छ र गोप्य च्याट गर्न सक्छ।
भ्यानिस मोडमा गरिएको च्याट, च्याट बक्समा बस्दैन। यो मोड अफ गर्ने बित्तिकै सबै मेसेज गायब हुन्छ। सुरूमा यो फिचर इन्स्टाग्राममा आउँदा मेसेज हेरेको लगत्तै भ्यानिस हुन्थ्यो। अहिले भने ६ घण्टासम्म मेसेज बस्छ।
इन्स्टाग्रामको मेसेज पनि स्क्रिनसट लिन सकिन्छ। यसमा जोसँग च्याट गर्दै हुनुहुन्छ उसले स्क्रिनसट लियो है भनेर स्क्रिनमा नोटिफिकेसन नै डिस्प्ले हुन्छ।मेसेन्जरको सिक्रेट च्याट होस् या इन्स्टाग्रामको भ्यानिस मोड, कसैले पठाएको मेसेज पाउनेले नहेरेसम्म डिलिट हुँदैन। अब पनि यसरी मेसेन्जर र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताले आफ्ना चिनेजानेका लागि गोप्य सन्देश पठाउन सक्छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ४, २०७८, १७:०१:००
शंकर ग्रुपले रियलमीका स्मार्टफोन भित्र्याउने
सामसङ ग्यालेक्सी ए–३२ मा के छन् विशेषता? (भिडिओ रिभ्यु)
नयाँ म्याकबुकको स्क्रिन सजिलै चर्किने र फुट्ने गुनासो
हुवाइको ‘पि–५०’ र ‘पि–५० प्रो’ मोडलमा यस्ता छन् फिचर
सामसङको नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी एफ–२२’मा कस्ता छन् फिचर?